Chemical Raw Ihe Manufacturers na Suppliers - China Chemical Raw Ihe Factory
Ethanol, nke amara site na usoro molekụla C2H5OH ma ọ bụ EtOH, bụ mmiri na-enweghị ntụ, nke transperent, nke nwere ike ire ọkụ ma na-agbanwe agbanwe. nke a na-akpọkarị mmanya na-aba n'anya, ọ bụ mmiri na-enwu ọkụ, na-agbanwe agbanwe na-enweghị ntụpọ na ọnọdụ okpomọkụ, nrụgide nke ikuku, ihe ngwọta mmiri ya nwere ọpụrụiche pụrụ iche, nke na-atọ ụtọ, na ntakịrị iwe. Soluble na mmiri, methanol, ether na chloroform.Ọ nwere ike igbari ọtụtụ ihe ndị na-edozi ahụ na ụfọdụ ogige inorganic.
Ethyl acetate bụ mmiri na-enweghị ntụpọ na-esi ísì ụtọ nke nwere mkpụrụ osisi na-esi ísì ụtọ ma na-agbanwe agbanwe. ether, soluble na mmiri, kamakwa ya na ụfọdụ ihe mgbaze iji mepụta ngwakọta azeotrope.